JobDescriptionSample.org - စာမျက်နှာ 20 ၏ 99 - ယောဘသည်ဖျေါပွခကျြ၏ကြီးမားစုဆောင်းမှု
မော်တော်ဘုတ်လုပ်ငန်းရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 2
function အလွန်သေးငယ်သောအင်ဂျင်လှေ -powered. သွားလာမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်ကူညီပေးနိုငျ. Career Skills Prerequisite Keep preferred courses, automated သွားလာမှုအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်လျှောက်ထား. packages များလူများ၏လုံခြုံရေးသေချာစေရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနည်းလမ်းများ Follow, နှင့်ရွက်လှေများကိုဖျက်ဆီး. ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအပေါ်မော်တော်ဘုတ်လမ်းပြမော်တာအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာနှင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုအမှုအရာကို run. Direct safety …
လုံခြုံရေးနှင့်မီးသတ်နှိုးစက်စနစ်များဆော့ဗ်ဝဲကယောဘဖျေါပွခကျြ / ဂျော့ဘ်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ Template ကို
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 0
Install, စံနစ်, ထိနျးသိမျး, သို့မဟုတ်ပြုပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မီးသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှိုးဆော်သံ cabling. ကြောင်း function ကိုသက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များဆွေမျိုးသေချာပါစေ. Job Skills Need Analyze methods to find troubles, ကျိုးပဲ့ကြောင်းကိုသွန်းဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ် padding ကိုအပါအဝင်. လက်ကိုင်ပြား bracket နှင့်ပူးတွဲ, တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်အပေါင်းအသင်း, အာရုံခံကိရိယာ, or camcorders and …
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာသမားတော်များကယောဘဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများနမူနာ
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1
သင်းသို့မဟုတ်ပြည်သူများကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမြှင့်တင်ရန်အခြေခံကြိုတင်ကာကွယ်-ဆေးဝါးနှင့်အများပြည်သူ-ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့်အတူကျွမ်း Apply, နှင့်ရောဂါအန္တရာယ်၏အဟန့်သို့မဟုတ်လျှော့ချစုစုပေါင်းနှင့်အတူကူညီ, ဒဏ်ရာ, မသန်စွမ်းမှု, သို့မဟုတ်နိဂုံးကို. လူဦးရေလျှောက်ထားစေခြင်းငှါ,- ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာကြော်ငြာနှင့်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးရဲ့အခြေအနေတွင်အတွင်းမှီခိုဆေးဝါးသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံပါတစ်ဦးချင်းစီ. …
ခြေဖဝါးနာအထူးကုယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
အစက်အပြောက်များနှင့်လူများကိုခြေမမှန်ခြင်းနှင့်ပုံပျက်သောကိုင်တွယ်. Job Skills Need Diagnose disorders of the foot employing medical backgrounds, x-rays, အမှန်တကယ်ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေး, နှင့်လက်တွေ့စာမေးပွဲရလဒ်များ. ပွနျလညျသုံးစက်ကိရိယာများမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြံပြုရန်, အမှန်တကယ်ဆေးတစ်လက်ခွဲစိတ်ကုသ. ခွဲစိတ် nodules အပါအဝင်အခြေအနေများဆက်ဆံပါ, calluses, ingrown လက်သည်း, မြင်းသရိုက်အနာ, တိုတောင်းရွတ်ပြောင်းဖူး, နှင့်အနာ. အကြံပြု …
Biomass Plant Technicians Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
Manage conduct servicing asneeded and and monitor biomass plant routines. Job Skills Prerequisite Check and evaluate natural feedstock, including lumber, decline components, or squander. Turbines to control and alter production of biomass or biofuels, or operate valves, push, motors -support strength. Accomplish upkeep that is routine or make maintenance that …
လိုင်စင်ရလက်တွေ့ပြီးတော့လိုင်စင်ရအသက်မွေးမှုသူနာပြုများကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့တာဝန်တွေကို
နေမကောင်းများအတွက်ဂရုမစိုက်, ပါတီနေအိမ်များဆေးခန်းများတွင်မသန်စွမ်းရှိခြင်း convalescing တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ရှေးရှေး, သီးသန့်နေအိမ်များ, ဆေးရုံများ, နှင့်ညီမျှကော်ပိုရေးရှင်း, သို့မဟုတ်ထိခိုက်. အဆိုပါမှတ်ပုံတင်သူနာပြုရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာလည်ပတ်စေခြင်းငှါ,. လက်မှတ်မရှိမဖြစ်. Career Skills Prerequisite Discover patients, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ကုသမှုအပါအဝင်ထှနျးချိန်ညှိ, patientsI ဝေဒနာတွေအတွက်, and acquiring …
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ်
တိုးတက် , တော်အောင်ပြုပြင်, စောင့်ရှောက်, သို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပစ္စည်းတွေ fix, ထိုကဲ့သို့သောမေးရိုးအဖြစ်, orthotics နှင့်ခြေတုလက်တု devices များ, အဆစ်, ကို arc အထောက်အကူ, သည်အခြားခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကရိယာများနှင့်အတူ. Job Skills Qualification Suit devices onto sufferers and make any alterations that are required. orthotic ထုတ်ကုန် Make, utilizing materials such as polycarbonate and thermosetting …
Statement Clerks Job Description / ခံမှုနမူနာပြီးတော့လုပ်ငန်းများ
ကူမသောသူ–လက်သမားကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
ဒီထက်ကျွမ်းကျင်မှုအကူအညီလက်သမားလိုအပ်ပြီးမြောက်တာဝန်များကိုအားဖြင့်,. တာဝန်များလျှောက်ထားပါဝင်သည်, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ် tools များပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကိုင်ပြီး, နှင့်သန့်ရှင်းရေးအလုပ်ရုံနှင့်ထုတ်ကုန်. Job Skills Prerequisite Keep and location timbers, ကျွန်းသစ်, ပူးတွဲသို့မဟုတ်သွေးတွေစီးထွက်လာဘို့ဒါမှမဟုတ်ဘောင် inplace. ငြမ်း Build, ကမ်း, သို့မဟုတ်မေးရိုး. တူရိယာကို Select လုပ်ပါ, devices များ, or resources from storage items …
အပ်ချုပ်သူ, လက်ကယောဘဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 4
အပ်ချုပ်, join သို့မဟုတ်အဆုံး, မကြာခဏအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော created ကုန်ပစ္စည်းများ, ချိတ်နဲ့ချည်ရှိခြင်း. stitchers နှင့် Weaver ပါရှိသည်. Career Skills Need Sewn, join ပြုပြင်လိုသော, အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပြည့်စုံဒြပ်စင်ဒြပ်စင်, ဥပမာအားအဝတ်အဘို့, လမ်းပြ, မွေ့ယာ, ကစားစရာအရုပ်, နှင့် wigs, ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်နှောင်ကြိုးထုတ်ကုန်များနှင့်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အလုပ်သမား. Reduce excessive threads or tips of …
စာမျက်နှာ 20 ၏ 99« ပဌမ...10«1819202122 » 304050...နောက်ဆုံး »